သင်၏ CV Enhance - လမ်းမှပေါ်တက်အောင်မြင်မှု၏ထိပ်တက်ပြီး - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Georgi Ivanov နှင့်အတူအင်တာဗျူး
ဤလ, အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်းကိုသင် Georgi Ivanov မိတ်ဆက် - ကိုတည်ထောင်သူကို 2014 အတွက်အတူတကွ Volen Valkov နှင့် Dimitar Vouldjeff နှင့်အတူလူငယ်တစ်ဦးလုပ်ငန်းရှင်, Enhancv ။ - ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းတလျှောက်လုံးထူးခြားတဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖန်တီးနှင့်သူတို့၏တပ်မက်လိုချင်သောအလုပ်အပေါ်ငှားရမ်းထားခံရဖို့သူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုများပြားရန်၎င်း၏အသုံးပြုသူများအခွင့်အလမ်းကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်အရာဝက်သန်းယူရို၏ပမာဏမှာ၎င်း၏စတုတ္ထရန်ပုံငွေ, ဤအချိန်ရဖို့အကြောင်းပါသောကုမ္ပဏီ, သူဟာဒီအောင်မြင်သော Startup စာမျက်နှာ၏လမ်းဖွင့်ပေါ်ရရှိခဲ့အတွေ့အကြုံအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရန်ဒီနေရာကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစိတ်ဝင်စားဖွယ်စကားပြောဆိုမှုခံစားပါ။
Plamena Petkova ဘို့ အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ Mag:
သငျသညျဘူမိဗေဒဘွဲ့ရခဲ့ကြပေမယ့်တကယ်တော့သင်တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲကွဲပြားခြားနားသောဦးတည်ချက်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိုရွေးချယ်ပါ။ ငါ့ကိုသငျသညျအကွောငျးကိုနည်းနည်းပြောပြပါ, သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းနှင့်သင်စတင်တည်ထောင်သူစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်နိုင်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲ အဘယ်အရာကို Self-သဘောပေါက်ဒီလိုမျိုးရန်သင့်အားဆွဲဆောင်?
ငါဆိုဖီယာတက္ကသိုလ်ဘူမိဗေဒဘွဲ့ရများနှင့်ကျွန်မမြူးနစ်အတွက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ2ပညာသင်ကာလတစ်ခုလဲလှယ်ကျောင်းသားအခါငါ့အပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိမ်းညွတ်အတွက်သော့ချက်ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါငါတစ်နည်းနည်းနဲ့အခွင့်အလမ်းများကိုဘဝကိုအမှန်တကယ်ကမ်းလှမ်းမည်မျှပိုပြီးသဘောပေါက်နှင့်ငါ့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကျယ်ပြန့်။
ငါသည်ငါ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပြန်ဘူလ်ဂေးရီးယားမှလေ accidentaly သို့မဟုတ်မငါအမှတ်မထင်ပြီးနောက် စမတ်ဒါဟာ Start- မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်ပိုပြီးလူငယ်များကိုအားပေးဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေတဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက။ အဲဒီမှာငါကအရမ်းပထမဆုံးနေ့ကနေအပူဆုံးစတင်, စာအုပ်တွေနဲ့ကို TED ဗီဒီယိုများဆွေးနွေးခြင်းစတင်ခဲ့သည်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူတခြား "conspecifics" နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်တဖြည်းဖြည်းငါတို့သည်လည်းအမျိုးမျိုးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူတက် လာ. မှစတင်ခဲ့သည်။ ငါတဦးတည်းစီမံကိန်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်အများအပြားမအောင်မြင်ကြိုးစားမှုများနှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ခွဲပြီးနောက်ဒီငါပွုအဓိကအရာဖြစ်၏။
သင်ဘယ်လို Enhancv ၏အခြေခံအုတ်မြစ်များအတွက်စိတ်ကူးအတူတက်လာခဲ့တာလဲ
Volen သူ့ကိုဂျာမနီမှာအလုပ်ရခဲ့တယ်ထားတဲ့ကိုယ်တော်အဘို့နည်းနည်းပိုသမားရိုးကျမဟုတ်သောကိုယ်ရေးရာဇဝင်, ကိုဖန်ဆင်းသောအခါစိတ်ကူးမွေးဖွားခဲ့သည်။ ငါ "လူကိုအိုး, ဒီကြောက်မက်ဘွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်" လို့သူ့ကို tolding ပြီးတော့ပြန်သတိရ🙂
ငါကိုအပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် 7-8 လအကြာ, သူ့ဦးခေါင်း၌ဒီဇင်ဘာလ 2013 အတွက်ရင့်ကျက်စိတ်ကူးသူသည်ငါ့ကိုမေးခဲ့တယ်။ ငါစိတ်ကူးအဖြစ်ကောင်းစွာတွေအများကြီးသူ့ကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသိပ်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲသဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ Mitko (Dimitar, တတိယပူးတွဲတည်ထောင်သူ & CTO) စီမံကိန်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနှစ်လအကြာမှာကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ဦးထံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆွဲဆောင်အောင်မြင်ခဲ့သည့်အခါအမှုအရာ, သို့သော်, တကယ်လေးနက်ဖြစ်လာခဲ့သည် ဆယ့်တစ်.
ဒီနရောမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း 13 လူများပါဝင်သည်နဲ့ကျွန်မဆက်ဆက်ရဲရငျ့စှာသူတို့တစ်ဦးစီတစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်နှင့်ဘဏ်ခွဲများတွင်နှစ်ပေါင်းရှိနေသော်လည်း, သူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုမှာခြွင်းချက်အတှေ့အကွုံပိုင်ဆိုင်သည်ဟုဆိုနိုငျသညျ။ ဒါကကျနော်တို့ဆက်ရေးလိုသောဒဏ္ဍာရီဖြစ်ပါသည် - ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကကုမ္ပဏီအတွက်သေချာသောအနေအထားအပေါ်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်မည်လော, doesn`t တကယ်သူ / သူမ၏အတွေ့အကြုံကိုနှစ်သို့မဟုတ်သူတို့တက္ကသိုလ်လက်ခံရရှိသောအဆင့်ပေါ်မူတည်သည်။
ငါ Enhancv အမျိုးအစား "ဒီဇိုင်းနှင့်အသုံးဝင်မှု" တွင်နှစ်စဉ် Forbes မဂ္ဂဇင်းဘူလ်ဂေးရီးယား E-volution ဆုပေးပွဲ 2016 အတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်ကုမ္ပဏီများထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ အဘယ်အရာကိုလမ်းကြောင်းသင်စတင်ကတည်းကလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြနှင့်မည်သို့ကုမ္ပဏီနှစ်နှစ်က၎င်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ပြီးနောက်ယခုသူ့ဟာသူဖွံ့ဖြိုးသနည်း?
ကျွန်တော်တစ်ဦးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီအဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီးကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်တစ်ဦးချင်းစီ CV ကိုပြု၏အစအဦးမှာ - ကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့အဟောင်း CVs ပြောင်းလဲသည်, ဖောက်သည်များနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသူတို့တစ်ဦးစီတဦးတည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီများသုတေသနပြုခဲ့ကြသည်, သူတို့အတွက်လျှောက်ထားရန်လိုကျနော်တို့ကသူတို့ကိုကူညီပေးနေခဲ့သည် တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ခုတည်းကုမ္ပဏီအဘို့မိမိတို့ CV ကိုစိတ်ကြိုက်ဖို့နဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်ပိုကောင်းသလိုအောင်ပြီးအများကြီးပိုသည်စည်းဝေးကြ၏။
ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလက်ခံရရှိသုံးလအကြာကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်ကို automation တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးချဉ်းကပ်မှုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်၏ဗားရှင်း 1, စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ နှစ်နှစ်နှင့်လေးဗားရှင်းအကြာတွင်ငါတို့သည်ဤလောကရှိကိုယ်ရေးရာဇဝင်များအတွက်ပလက်ဖောင်းသုံးစွဲဖို့အရှိဆုံး, ခေတ်ပြိုင်ခေတ်သစ်လွယ်ကူရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အချို့ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီတွေကအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပေါ်ငှားရမ်းထားပြီ Uber နှင့် Facebook နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဟားဗတ်နှင့်အဖြစ်တက္ကသိုလ်များဘွဲ့ရပါပြီ MIT က.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျကတည်းကကျနော်တို့ Forbes မဂ္ဂဇင်းပါ E-volution ဆုပေးပွဲအားဖြင့်ထိပ်တန်း3အတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံခဲ့ရရာများအတွက်ချီးမြှင့်, ကျွန်တော်တို့ကိုအဘို့ကြီးစွာသောအသိအမှတ်ပြုမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
ရဲ့ယေဘုယျအားစတင်အကြောင်းကိုနည်းနည်းစကားပြောကြပါစို့။ အောင်မြင်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦး startup အဘယ်အရာလိုအပ်ပါသလဲ?
အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့, ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ Hard အလုပ်တွေအများကြီး: ငါအရာသုံးခုကတက်အနှစ်ချုပ်လိမ့်မယ်။
နညျးလမျးမြားစှာငါအရာအားလုံးကိုအလွယ်တကူချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်ထင်နေသည်ကာလပတ်လုံး, အထက်ပါအရာသုံးခုရှိတယ်လည်းဖြစ်သကဲ့သို့, ရှိပါတယ်။ အစအဦးမှာအရေးအပါဆုံးအရာငါသူတို့တက်ကြွစွာပါကဖြေရှင်းနိုင်မှကွဲပြားခြားနားသောအခြားရွေးချယ်စရာအဘို့ရှာကြသည်ဟုဆိုလိုသိသိသာသာအောက်မှာသကဲ့သို့သင်တို့ဖြေရှင်းနေသောပြဿနာ, သင့်ပစ်မှတ်ပရိသတ်အတွက်တကယ်သိသိသာသာရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့လျှင်, သင် (နေသမျှကာလပတ်လုံးသင် :) အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောသုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းအဖြစ်, သင်တန်း) ကိုသင့်လျော်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံနှင့်လည်းဖောက်သည်ရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်
ငါသည်သင်တို့ကိုသင့်ရဲ့စိတ်ကူးနှင့်အခြားအသိပညာနှင့်အဆက်အသွယ်နှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မည်သူတွေကိုထံမှရန်ပုံငွေကိုရှာဖွေဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဆိုပါက, ငါသည်မှားယွင်းတဲ့ဘာမှရှိမယ့်ထင် don`t ထင်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်တွင် - ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုသငျသညျ၎င်းငျး၏အစအဦးမှာသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တကယ်အရေးကြီးသောမက်ထရစ်ကိုအာရုံစိုက်ကူညီပေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဒီက "CV ကို၏အောင်မြင်မှု" နှင့်အရည်အသွေးကို CVs ဖန်တီးသောသူလူများ၏ရာခိုင်နှုန်းရှိကြ၏။
ကျနော်ကျိန်းသေကြောင့်တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရရန်လွယ်ကူသည်ထင် don`t - အားလုံးသငျသညျသေးမတည်ရှိပါဘူးနှငျ့သငျကတင်ဆက်ထားပါတယ်နေကြသည်ဘယ်သူကိုမှလူများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်စိတ်ကူးတစ်ခုခုခံကာကွယ်ဖို့ရှိသည်နောက်, ဒါကြောင့်အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းကိုသင်၏အဖွဲ့သည်ကြောင်း က - ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်သင့်ကိုမေးသမျှကိုသင်တစ်ဦးကောင်းစွာထင်ထွက်တုံ့ပြန်မှုရှိရမည်။
Enhancv ၏အခြေခံအုတ်မြစ်သို့လာပြီမီ, သငျသညျဒါအောင်မြင်သောအခြားနှစ်ဦးကို startup စီမံကိန်းများမဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲပါပြီ။ ဘာသင်ခန်းစာတွေကိုသင် Enhancv ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ယခုသင်ကူညီခြင်းဖြစ်ကြောင်း startup များအတွက်ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုကြိုးစားမှုကနေလေ့လာသင်ယူခဲ့တာလဲ
သူတို့ကိုငါတစျဦးစီကနေအများကြီးသင်ယူ, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းအရေးကြီးဆုံးကောက်ချက်ကအသင်းရှိလူကအရမ်းစမတ်နှင့်အေးမြမသာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ခဲ့ကြသည်ဒါပေမယ့်လည်းကွဲပြားခြားနားသော complementary ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ဖို့နှင့်အသင်းအလုပ်ရှိမရှိကြွင်းသောအရာကြောင့် အဖြစ်အများကြီးသင်လိုချင်သောအဖြစ်တိုက်ရိုက်သင်ကိုယ်တိုင်ဖွငျ့လုပျဘယ်လောက်အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါအကြှနျုပျသထားသောစာပိုဒ်တိုများ "ဥပမာအားဖြင့် Lead" အဘယ်အရာကိုသဘောပေါက်ကယ့်ကိုဆိုလိုတယ် - ငါကျိန်းသေငါပြန်ထို့နောက်အကောင်းဆုံးသာဓကဖြစ်ခဲ့သည်ထင် don`t ။
ကုမ္ပဏီအဖြစ် Enhancv ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအပြင်၌သင်တို့လည်းအချို့သောလမ်းညွှန်လုပ်ပေး - သင်သည်သူတို့၏အတွေးအခေါ်များ actuate နှင့်အောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်အခြားစတင်ကူညီနေတာပါ။ အဘယ်အရာကိုလုပ်ရန်သင့်အားလှုံ့ဆျော?
သူတို့အနာဂတ်မှာဖြစ်ကြပြီးထိုအရပ်၌ပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့လူတွေကိုပိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပှားပါလိမ့်မည်, ကြောင့်သူတို့ကိုငါကူညီပေးသည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျနော်ဖြစ်စေဘာမှနားလည် didn`t အခါ, တွင်လည်းအလားတူလမ်းအတွက်ငါ့ကိုကူညီခြင်းနှင့်အကြှနျုပျအဘို့ကတစ်နည်းနည်းနဲ့လက်ဟန်ခြေဟန်ပြန်လာမယ့်တာဝန်နဲ့တူခံစားခဲ့ကြသူတွေကိုရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့, ဒါပေမဲ့ကျွန်မနယ်ပယ်များတွင်အားလုံးနီးပါးလုပ်ငန်းရှင်များကဒီကိုမြင်လျှင်စောင့်ရှောက်လော့။
အဘယ်သူမျှမက, အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့ startup ၏အောင်မြင်မှုကိုများအတွက်အရေးအပါဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ယခုတွင်ငါသည်ထိုသို့ချွတ်ချင် don`t ။ 😉
ငါ့ကို Enhancv ပြင်ပ Georgi Ivanov အကြောင်းနည်းနည်းပြောပြပါ။
Georgi, ရယ်စရာနှင့်စမတ်လူတို့နှင့်အတူစကားပြောပြဇာတ်ရုံသွားအသစ်သောအရာတို့ကိုကြိုးစား, စားပွဲတင်တင်းနစ်ကစားခြင်း, ထင်ရှားတဲ့ Nook ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာ, အမျိုးမျိုးသော (သို့သော်လက်တွေ့ကျ) အကြောင်းအရာများအပေါ်စိတ်ဝင်စားဖို့စာအုပ်တွေဖတ်နေနှင့်ကားတစ်စီးမောင်းနှင်အားဖြင့်သူ့အာရုံကြော calms, ATV သို့မဟုတ်ရုံများက likes Wing Chun ကျင့်။ 🙂
သင်ဘယ်လို "ကျွန်မပျော်ရွှင်စွာအောင်မြင်သောဖြစ်ကြောင်းကို" ဟုအတွေးနှင့်အတူနံနက်ယံ၌ထနိုးနိုင်ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အသက်တာကိုစီစဉ်ပေးသင့်တယ်ထင်ပါသလဲ
သင်ရုံသင်ရှိသည်အဘယ်အရာနှင့်အတူပျော်ရွှင်ဖို့ရှိသည်။ ကောင်းသောအမှုအရာတို့ကိုဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပျက်နှင့်သည်းခံခြင်းအမှန်ပင်ပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်အထိအရေးပါသောကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မရမယ့်အဆုံးရလဒ်, မြေတပြင်လုံးအလုပ်ဖြစ်စဉ်ကိုပျော်မွေ့နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။
သင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်လမ်းတစ်လျှောက်ကျရှုံး, သို့မဟုတ်မမှာအားလုံးကြိုးစားရန်, ထို့နောက်သင့်ဘဝတစျခုလုံးတွေးမိဖို့ကြိုးစားဖို့ပို frightening- ဘယ်ဟာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် "သင်ပြီးတော့ပြန်ကြိုးစားခဲ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဟာလဲဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့ ... "
Georgi Ivanov အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ:
Facebook ပေါ်မှာ Enhancv
Facebook ပေါ်မှာ Georgi Ivanov
cv, enhancv, တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးပုံပြင်များ, startup | | rating:5/ 30